Minamato Yekuti Titaure Pasati NeChiraira Chvene | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Minamato yekutaura Pamberi peChipo Chirairo
Minamato yekutaura Pamberi peChipo Chirairo
1 Coprinsians 10:16: Mukombe wemaropafadzo watinorumbidza, haazi kuyanana neropa raKristu here? Chingwa chatinomedura, haizi kuyanana kwemuviri waKristu?
Kucherechedzwa kweChirairo Chitsvene kwakashungurudzwa zvakanyanya nevaKristu vazhinji uye nyanzvi dzechitendero. Chimwe chezvinhu zvishoma zvakarairwa naJesu izvo zvatinofanira kugara tichiita mukurangarira kwake kutora Kudya kwaShe Kwemanheru sekutsanangurwa kwazvakaitwa mubhuku raVaKorinde 11: 24-26. Iko kutanga kwemweya mumuviri waKristu.
Kana isu tikatora Chirairo Chinoera, tinozviyeuchidza isu kuti Kristu akaradzika sei hupenyu hwake nekuda kwedu, chikwereti chinorema icho chatisinga vabhadhare. Isu tinofanirwa kugara tichisvika pakuziva kuti hatisi chinhu kana isu pachedu, Kristu wakatiita isu zvatiri uye zvatiri, uye akazviita nekuradzika hupenyu hwake. Nhasi tichave tichitarisa paminamato yekutaura pamberi pechirairo chitsvene.
Zvakare, isu tinofanirwa kunzwisisa kuti kusikwa kwedenga nepasi zvakadhura Mwari hapana chinhu nekuti Mwari vakataura zvese kuti zvivepo. Nekudaro, kuponeswa kwedu neruregerero zvakadhura Mwari zvakangofanana nezvose, Iye aifanira kuradzika pasi hupenyu hwomwanakomana wake wakazvarwa kuti munhu aponeswe.
Kristu akaratidzira izvi mubhuku ra1 Vakorinde 11 mushure mekunge avonga, akamedura chingwa icho chaive chinhu chemuviri kumiririra muviri wake waifanira kuputswa, akagovana nevadzidzi vake uye mumupendero mumwe chete, akatora waini chinhu chemuviri chinomiririra ropa rake uye chakagovana pakati pevadzidzi vake kuti vanwe. Pashure pacho, akavakurudzira kuti vazviite nguva dzose pakurangarira kwake.
Izvi zvinoreva kuti tinotakura muviri waKristu uye ropa raKristu rinoyerera mumitsipa yedu, nokudaro, isu tinofanirwa kumiririra Kristu zvakanaka. Zvinokufadza iwe kuziva kuti sezvakakura zvikomborero zveKwayita Chitsvene zvakadarowo, saka kutukawo kana zvikasaitwa nemazvo.
Jesu, zvakadaro, akapa mamwe mamiriro ekutora chikamu kwevanhu muChirairo Chitsvene. Muna 1Vakorinte 11:27 Kristu akati, ani naani achadya chingwa ichi uye anwa mukapu iyi yaIshe, zvisina kukodzera, achava nemhosva mumuviri uye ropa raIshe. Saka zvakakosha kuti munhu wese anozodya muChirairo Chitsvene anofanira kunge ari mune yakasarudzika yepfungwa isina mweya yekufunga uye kufungidzira.
Zvikuru saka, kune zvimwe zvakanaka zveChipo Chirairo chisingaonekwe kana chikatorwa zvisizvo, kurapwa kunouya pamwe nekudyidzana, kubudirira uye kusununguka kubva mudzvinyiriri akaipa.
Paunenge wave kuda kutora Chirairo Chitsvene iyi minamato inotevera yekutora;
• Tenzi Mwari, tinokudza zita renyu dzvene nekutendera Kristu kuisa hupenyu hwake nekuda kwedu, isu tinoziva kuti nekuda kwesimba reChipo, isu takabvumirana naKristu Jesu uye akatakura kusasimba kwedu, zvivi, uye kuzvidzwa pamuchinjiko weKarivhari. Tinonamatira iwe kuti nekuda kwesimba reChirairo Choyera, uchatiswededza pedyo newe muzita raJesu.
• Baba vari kudenga, nekuti iyo inotakura nyama neropa raKristu uye rugwaro runoti munhu ngaarege kundinetsa nekuti ini ndakatakura mucherechedzo waKristu, Ishe, tinopa rusununguko rwedu kubva kuna mudzvinyiriri muzita raJesu.
• Baba vari kuDenga, tinokumbira kuti nesimba reCommunication Inoyera kuti mubate chikamu chehupenyu hwedu chinoda kubatwa. Tinonamata kuti izvi zviite kuti tisimbe pamweya uye muchabatsira kuita chete zvinhu zvinofadza Mwari muzita raJesu.
• Ishe Jesu, rugwaro runoti chero murume ari muna Kristu chisikwa chitsva uye zvinhu zvekare zvapfuura. Isu tinoziva kuti ruregerero rwedu rwakatengwa nemutengo, Kristu akaribhadharira zvakanyanya pamuti uye isu takawana sununguko yedu kubva kuchivi. Ishe Jesu, nekuda kweCommunication ino Tsvene, tipeiwo kusvinura kwemweya kuti hatichisiri muranda wechivi nekuipa. Tipeiwo simba kusambodzokera mavari muzita raJesu.
• Ishe wokudenga, tinokumbira kuti tigare tichiita izvi muchikurangarira uye kana tichiita izvo, tinogara tichiyeuka zvese izvo zvamakatidzidzisa. Tinonamata kuti tirege kuitora kuti itongwe, hatizopihwa mhosva nazvo, asi iwe unotipa rusununguko uye rusununguko rwatinokodzera muzita raJesu.
• Jehovha Ishe, Chirairo Chizere chinhu chemuviri chinoshandiswa kumiririra muviri neropa rako. Patinomedura ropa uye nekumwa waini, mumweya isu takatora ropa rako, ropa rako rinogona sei kuyerera mumitsipa yedu uye isu tichiri kuzotambudzwa nehurwere? Bhaibheri rinoti nekuti akatakura matenda edu ese uye akaporesa matenda edu ese. Ishe, ngapave nekupora nekunaka kweCommunion inoyera muzita raJesu.
• Ndingatakura sei ropa raJesu mumidzi yangu uye ndichiri kutambudzwa nadhiabhori, zvivi, uye kusarurama. Ishe Jesu, nesimba reChirairo Chitsvene, ndinokuzivisai kusunungurwa kwangu kubva kuchivi nedhimoni muzita raJesu.
• Ishe Jesu, tinonamata kuti nechikonzero cheSungano Dzvene muchandipa zaruriro yezvinhu zvisingakufadzei nezvangu. Mwari, nemoyo wekuzvininipisa ndinonamata kuti imi mundibuditse pachena izvo zvisina basa nezvangu. Ita kuti Chidyo Chitsvene chivhure maziso uye upe njere yekugona kukushumira zvirinani muzita raJesu.
• Ishe Jesu, nguva yeKudyidzana ndemumwe mukana mukuru wekufungisisa nezvehupenyu hwangu uye kuti ndakayambuka sei imi. Ndiri kutsaurira hupenyu hwangu kwauri, ndiri kuzvisunungura kwauri zvizere, Ishe Jesu tora hupenyu hwangu zvizere. Rega hupenyu hwangu hwese huve kuratidzwa kwako, ini ndoda kutakura iwo chaiwo mufananidzo wababa mune zvese zvandinoita, tsvaga kutaura kuburikidza neni uye rega vanhu vakuone kuburikidza neni muzita raJesu.
Previous nyayaMinamato Yekuti Uve Chikwereti Chemahara
inoteveraMunamato wekuchenesa Chechi
18 zvine simba husiku minamato yemanheru
Mapisarema 40 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
Hondo dzekunamatira minamato kuti uone Zviporofita zvichizadziswa